Inona ny AUR ary ahoana ny fomba ahafahana mampiasa azy ao amin'ny Arch Linux sy ny derivatives | Avy amin'ny Linux
Inona ny AUR ary ahoana ny fomba ahafahana mampiasa azy amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
Eto amin'ny bilaogy imbetsaka izahay dia miresaka momba ny fametrahana fitaovana sasany na fampiharana amin'ny ankapobeny amin'ny Linux, aryn izay manandrana mampiditra ny fizarana malaza indrindra.
Anisan'ireny no ampidiriko ao amin'ny Arch Linux sy ny derivatives-ny. Na dia iray fotsiny aza no tiako horesahina manokana dia tsy azoko atao ny miala amin'ireo hafa, satria amin'ny farany dia mitovy ny fototr'izy ireo.
Amin'ny ankamaroan'ireo lahatsoratra ireo izy ireo amin'ny ankapobeny dia manome soso-kevitra ny fametrahana avy amin'ny AUR ary amin'ny fampiasana "AUR mpanampy" hanaovana izany.
Ho an'ireo ny mpamaky tsy mahalala an'io dia hiresaka kely momba an'io isika anio.
Ireo izay Ireo mpampiasa Linux miaraka amina fotoana fampiasana, dia tokony hamantatra ny teny hoe "repository" izay loharano lozisialy tsotra izao.
izany midika izany dia toerana fitahirizana izay ahazoana fonosana rindrambaiko ary apetraho amin'ny solosaina.
Ny trano fitahirizana (antsoina koa hoe repos) dia azo sokajiana ho karazany roa: tahiry ofisialy sy toerana anaovan'ny antoko fahatelo (mpampiasa) mpampiasa rehetra.
Mazava ho azy fa ireo loharanom-baovao repo ofisialy dia napetraka mialoha amin'ny Arch Linux, Manjaro, Antergos, na izay fizarana azo avy amin'ny Arch Linux.
Etsy ankilany, misy ny Archiving Archiving Repository (AUR), Inona ity trano fitehirizam-bokin'ny fiarahamonina ho an'ny Arch Linux sy ny forongony.
Toy ny tahiry ofisialy, izy ireo koa dia misy famaritana fonosana (PKGBUILD) izay azo atambatra avy amin'ny loharano amin'ny makepkg ary avy eo apetraka amin'ny alàlan'ny pacman. Misy AUR hizara fonosana vaovao avy amin'ny fiarahamonina.
1 Mametraka sy manaisotra ny rindranasa
1.1 Fampiasana AUR amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
Mametraka sy manaisotra ny rindranasa
Raha hametraka rindranasa amin'ny rafitra misy Linux na fiaina Arch Linux dia azonao atao ny "Add / Delete software" izany dia atao amin'ny terminal avy amin'ny alàlan'i Pacman.
Na dia any amin'ny tontolon'ny birao sasany aza dia mazàna dia misy fitaovana manampy anao hametraka na hanaisotra ny rindranasa.
Amin'ity tranga ity dia azontsika atao koa ny mampiasa fitaovana malaza antsoina hoe Octopi, izay mpamatsy sary an'i Pacman izay mamela antsika hifandray amin'ny AUR ihany koa.
Fampiasana AUR amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
Afaka manampy fanampiana AUR amin'ireo rafitra azo avy amin'ny Arch Linux izay ahafahan'izy ireo mahazo fidirana amin'ireo rindranasa an'arivony noforonin'ny vondrom-piarahamonina.
Raha heverina fa ny app dia entin'ny fiarahamonina, tsy ny fampiharana rehetra no havaozina matetika.
Raha ny marina dia misy fampiharana maromaro izay tsy novaina nandritra ny 5 taona mahery. Azonao atao ny manalavitra ireo fampiharana toy izany satria izy ireo dia mety hiteraka olana amin'ny fitoniana eo amin'ny rafitra ary amin'ny tranga ratsy indrindra dia mety hampidi-doza ihany koa izy ireo.
Mba hahafahana mamela izany, dTsy maintsy manampy andalana vitsivitsy amin'ny fisie pacman.conf izahay, izay ampianay ireto andalana manaraka ireto amin'ny faran'ny fisie.
Sokafy fotsiny ny terminal ary amboary amin'ny nano na ny tonian-dahatsoratra tianao indrindra:
Y manampy izahay amin'ny farany:
Vita izao, tsy maintsy manatanteraka ity baiko manaraka ity isika, Mba hampifanarahana ny tahiry sy ny tahiry ampiana miaraka amin'ny rafitra:
Vita izao tsy maintsy mametraka mpanampy isika hanampy anay hametraka ireo rindranasa ao anatin'ny AUR, ho an'ity dia azonao atao ny mijery ny lahatsoratra manaraka izay anolorako hevitra iray.
Azon'izy ireo atao koa ny misafidy ny hampiasa manager software fotsiny ary aza mampiasa ny tsipika baiko, araka ny nolazaiko an'i Octopi, izay fitaovana fitantanana fonosana tena tsara ho an'ny Arch Linux sy ny derivatives.
anefa Manoro hevitra anao manokana aho hampiasa ny terminal araka izay tratra, satria amin'ity fomba ity dia hanomboka hizatra amin'ny baiko izy ireo ary hianatra hitantana, hanova, hanavao ary hitantana ny rafitr'izy ireo.
Na midina, esory ny tontolon'ny sary, ary avereno ny rafitra sy maro hafa.
Ity dia iray amin'ireo fiasa tena tiako momba ny Arch Linux satria na very ny tontolo misy sary ianao, raha toa ka nametraka tamin'ny volanao ianao dia ho fantatrao fotsiny izay tokony hatao hamerenana azy io indray.
Izay, tsy toy ny rafitra hafa, lasa adala ny mpampiasa ary maro amin'izy ireo no misafidy ny hametraka indray.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona ny AUR ary ahoana ny fomba ahafahana mampiasa azy amin'ny Arch Linux sy ny derivatives
Emerson dia hoy izy:
Mihevitra ilay tovolahy fa mitovy ny fantany amin'ny fantany, ka dia novakianao izy, ary nivoaka toy ny trondro toy ny nidiranao
Amboary ny rakitra, hoy izy, ao amin'ny fononteny ve ny archlinuxfr? Ho hitako ho lohateny ve izy io? Tokony esoriko ve ny famantarana #? Moa ve ity andalana manaraka ity (Server = http://repo.archlinux.fr/$arch) aiza no hametrahako azy? Miaraka amin'ny habaka? Amin'ity fotoana ity dia manenina ianao fa nandany fotoana
Mamaly an'i emerson
IssueHunt: sehatra vaovao hamatsiana ara-bola open source
Hivoaka amin'ny herinandro ambony ny Fedora 29 Beta